Jimicsiyada Dumbbell: faa'iidooyinka, dhinacyada iyo waxqabadka joogtada ah | Ragga Stylish
Markii aan tagno qolka jimicsiga ee aan ku tababbaraneyno guriga waa inaan isticmaalnaa dharbaaxo si aan u awoodno inaan sameyno jimicsi dhameystiran. Tababbarka noocan ah wuxuu na siinayaa faa iidooyin gaar ah sida kala duwanaanta layliyada. Waana badan yihiin jimicsi dumbbell Waxay sidoo kale u adeegaan sida wanaagsan xagga aragtida dhaqaalaha. Iibsiga dumbbells si loogu tababaro guriga waa mid jaban. Faa'iidooyin kala duwan ayaa laga helaa sameynta jimicsi jimicsi dumbbell toddobaad kasta.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato leyliska jimicsiga iyo sida loogu qaybiyo hab-nololeedka caadiga ah.
1 Faa'iidooyinka jimicsiga dumbbell
2 Dhinacyada aasaasiga ah
3 Naqshadaynta jimicsiga jimicsiga dumbbell
4 Tababar si loo helo murqaha
Faa'iidooyinka jimicsiga dumbbell
Maskaxda ku hay in dumbbells ay bixiyaan la qabsi weyn marka la barbar dhigo tababarka baararka Olombikada ama mashiinnada. Haddii aan guriga joogno, ma heli doonno boos ama lacag aan ku iibsanno mashiinka noocan ah. Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee jimicsiga dumbbell ayaa ah taas gacan ka geysato hagaajinta kala-goynta murqaha. Tani waa wax caan ku ah dadka badankood. Muruqyada ka dhaqso badan kuwa kale waana in loo tababaraa si kali kali ah si loo magdhabo koritaankan aan sinnayn. Sidan oo kale, waxay u oggolaaneysaa isku dheelitirka iskudhafka jirka, kuwaas oo muhiim u ah jirka bilicsanaanta.
Faa'iidada kale ee xiisaha leh ee laga soo saari karo jimicsiga dumbbell waa taas waxay noo ogolaaneysaa inaan balaarino oo aan horumarino dhaq dhaqaaqyada kala duwan. Waxay kuxirantahay nooca jimicsiga aan sameyneyno, xoojinta aan dooneyno inaan siino kooxda muruqyada la tilmaamay waxay yeelan kartaa firfircooni muruq weyn. Waxaa jira daraasado qaarkood oo xaqiijinaya jimicsiga, kursiga keydka ee hortiisa dumbbell cusub, waxaa jira firfircooni weyn oo ah qaybta weyn ee 'pectoralis major' marka jimicsiga leh dumbbells la sameeyo. Tani waa sababta oo ah kala-duwanaanta dhaq-dhaqaaqa ayaa ka weyn oo muruqyadu waxay u shaqeeyaan si kali kali ah si loo magdhabo dadaalka.
Markaan jimicsiga ku shaqeyno qoob-ka-ciyaarka waxaan u baahanahay firfircoonaan murqo ah si aan u awoodno inaan qorno fiilooyinka Markaan isticmaalno dumbbells waxaan siineynaa diiradda weyn kooxda muruqyada sidaas darteedna, qoritaanka weyn ee muruqyada muruqyada oo u tarjumaya heer aad u sareeya oo ah dhiig-kar.
Faa'iidooyinka kale ee jimicsiga dumbbell uu yeelan karo ayaa ah inay yihiin kuwo wax ku ool ah. Dumbbells waa aalado aan qaadanayn boos badan waxayna ku qaadan karaan labadaba meelaha furan iyo kuwa xiran. Waxay sidoo kale na siin kartaa nabadgelyo weyn haddii aan barbar dhigno baararka. Dumbbells-ku waxay xambaaraan gadaasha wax ka yar baararka.
Dhinacyada aasaasiga ah
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee tababarka guud ahaan waa in dad badani tagaan murqaha. Xaaladdan oo kale, haddii aan tababar ku qaadanno dumbbells oo aan gaarno murqaha oo shaqeyno ama lumino dheelitirkeenna, way ka ammaan badan tahay in la tuuro qoob-ka-ciyaarka marka loo eego xarkaha. Tani waxay naga caawinaysaa inaan karti u yeelano inaan ku tababbarano xorriyad buuxda iyadoo aan loo baahnayn inay innaga ag dhowaadaan oo naga caawin kara haddii aan guul darreysano.
Qeyb weyn oo ka mid ah jimicsiyada isku dhafan ee wadajirka ah waxay ubaahantahay xuddunteenu inay xasiliso waana qodob aad muhiim ugu ah waxqabadka cayaaraha. Waxaad ku shaqeyn kartaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo leh dumbbells iyo dhammaan kooxaha muruqyada.
Naqshadaynta jimicsiga jimicsiga dumbbell
Waxaan arki doonnaa sida barnaamijka tababarka loogu talagalay in lagu dhiso jimicsiyo taxane ah oo naga caawiya inaan ku helno muruqyo leh qaababka dhaqdhaqaaqa kala duwan. Haddii aan helno takhasusle nala talin kara oo qiimeyn kara ujeedooyinkeena, waxaan aragnaa in barnaamij tababar oo fudud oo fudud la qaabeyn karo. Khabiirka ayaa mas'uul ka ah go'aaminta taas oo ah ikhtiyaarka ugufiican markaad kalifeyneyso fadhiyadayada.
Qodobka ugu horeeya ee ay tahay inaan qiimeyno wuxuu noqon doonaa ujeedka. Barnaamij gaar ah oo loogu talagalay hal qof ayaa laga yaabaa inuusan ku fiicnayn dadka kale. Taasi waa, waa inaan gaar u gaarno jimicsiga xitaa haddii lagu sameeyo layliyo carrab la '. Waxay kuxirantahay ujeedada aan leenahay, waa inaan dhisnaa tiirarka muhiimka ah ee tababarka sida mugga, xoojinta iyo soo noqnoqoshada. Kuwani waa mabaadi'da aasaasiga ah ee tababarka waana in lagu dabaqaa nooc kasta oo shaqo ah.
Intaa ka dib, waxaan u sameyn doonaa xulasho jimicsi kooxahaas muruqyada ah oo aan dooneyno inaan ku tababbarano qaababkaas dhaqdhaqaaqa ee aan ku dareemeyno raaxo badan waxaanna si fiican ugu qori karnaa fiilooyinka muruqyada Waxaan ka bilaabaynaa jimicsiyadaas oo nasiinaya dareemo fiican. Haddii aan ku tababbarno qoob-ka-ciyaarka waxaan sameyn karnaa layliyo fara badan oo isku dhafan. Tan waxaa loo qaybin karaa layliyo loogu talagalay jirka sare iyo jirka hoose labadaba.
Farsamada ku jirta layliyada waxay ahayd door aasaasi ah oo muhiim ah markii tababarka, xitaa ka sarreysay mabaadi'da tababarka. Waxtar ma leh in la dhiso mugga tababarka dhammaystiran, xoojinta iyo soo noqnoqoshada haddii aynaan garanayn ama u fulinayn farsamada si wanaagsan layligga.
Tababar si loo helo murqaha
Mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu badan ee la raadinayo waa hypertrophy. Si kastaba ha noqotee, maahan inaad tixgeliso inta badan habka tababarka, laakiin cuntada. Si loo helo cufnaanta murqaha waa inaan ku sii jirnaa dheellitirka kalooriga ee cuntada si joogto ah muddo kadib. Waa midda ka dhigaysa mid culeys na koraysa inta aan muruqyada ka cararno iyo dufanka qaarkood. Tiro yar oo barnaamijyada tababarka ah ayaa dejiya waxa u dhexeeya ama ku celcelinta ay ku jiraan, ama waa maxay xaddiga ugu badan ee mugga tababarka ee loo baahan yahay si loo bilaabo hagaajinta la qabsigayaga.
Qaar ka mid ah tilmaamaha aasaasiga ah ee la raacayo:
Tirada ku celcelinta: waa inaan iska dhignaa nafteena noocyo kala duwan oo soo noqnoqod leh oo dhex mara 6-20. Maskaxda ku hay in taxane kasta aad u baahan tahay inaad hadda gaarto xoog ku dhowaad muruq jabka.
Mugga tababarka: shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, inbadan ama ka yar sayniska ayaa qeexaya celcelis ahaan inta udhaxeysa 10-20 aaa taxane koox murqaha ah usbuucii.
Inta jeer: waxay la xiriirtaa tirada jeer ee koox muruq maado ah. Soo noqnoqoshada laba waa tan ugu fiican ee si fiican u qaybisa mugga tababarka iyo xakameynta daalka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto laylisyada dumbbell iyo dhammaan faa'iidooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Jimicsiyada Dumbbell
Jilayaal qurux badan